मासु पसलमा अनुगमन, ‘काँचो मासु’मा झण्डै बेहोस....... - मालागिरी समाचार
१ असार २०७५, शुक्रबार ०६:४१
Home›Featured›मासु पसलमा अनुगमन, ‘काँचो मासु’मा झण्डै बेहोस…….
१ असार, तुलसीपुर (दाङ) / हामी भन्दा पहिले कुकुरले काँचो मासु लुछिरहेको थियो, त्यहाँ । हाडखोर डुंगडुंग्ती गन्याउने । तुलसीपुरको स्मार्ट वधशाला अनुगमनमा थियौं हामीहरु । सल्यानी मासु, रोल्पाली मासु, रुकुमेली मासु, तालाचुंगि मासु अनि बुझौना चौधरीको बंगुर ।
एक किलो काँचो मासुमा करिब सय ग्राम भार झिंगाहरुले थेगिरहेका थिए । केहि भार पानी र अन्य फोहरले । हामीलाई स्वागत गरेको थियो, देवेन्द्र गंगा मासु पसलले, जुन तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बसपार्क नजिकको मासु मण्डिको पहिलो पसल हो । पहिलो भन्दा दोस्रो खप्पिस, दोस्रो भन्दा तेस्रो खप्पीर अनि चौथोका रुपमा बधशालामा जांदा एउटा बकेर्नो भैसी कराइरहेको थियो, सायद उसको आयु आज विहिवार अन्तिम हो । बधशालामा कुकुरले काट्दा काट्दै बांकि रहेको मासु लुछिरहेको थियो । सँगै राखिएको हड्डी ग्यारेजले अवलोकन गर्नेलाई झण्डै बेहोस बनाएको थियो ।
कति दुर्भाग्य, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका पशु सेवा प्रमुखले पनि त्यो अवस्था नाक छोपीछोपी मुश्किलले अवलोकन गरे, सहकर्मि पत्रकारहरु आधा भन्दा बढि त्यो हड्डी ग्यारेजमा पुग्नै सकेनन् । वाक्वाक्तीको अवस्था । म स्वयम पनि झण्डै ढलिन, त्यो दुर्गन्धले ।
क्या व्यस्त बजार । फलामको हुकमा मासु टंगाएर चक्कुले टुकारी रहेका थिए मासु कामदारहरु । दुर्गन्ध उनीहरुलाई बानी परेको छ । फोहर थुपार्ने उनीहरुलाई बानी परेको छ, अनि दुइतिनदिन पछि नजिकैको पातुखोलामा सर्लक्क फोहर फाल्ने बानी परेको छ उनीहरुलाई ।
डुंगडुंती गन्धले सोभित छ पातुखोला, सायद राइखल्यान पुग्दा केहि संग्लो हुन्छ, त्यहांका स्थानीयबासीले त्यहि पानीमा कपडा धुन्छन्, त्यहिं नुहाउछन् । मासुका टुक्रा त्यहां पुग्दैनन्, तर व्याक्टेरीयाले त्यहां पनि हानीरहेको छ । त्यसैले त तुलसीपुरका निजि क्लिनिक, निजि अस्पताल र अन्चल अस्पताल अहिले विरामीले भरीभराउ छन् । औषधि बिकेको छ, पेसा चलेको छ ।
मासु पसलेलाई चाहिने खासमा डि फ्रिज हो, तर त्यहाँ नो फ्रिजको अवस्था । फ्रिज राखेर के गर्ने बत्तिनै आउंदैन नियमित’—मासुमण्डि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष झग्गु चौधरीले विद्युतलाई सरापे, अनि आन्तरीक रुपमा फोहर व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई सरापे । मानौं उनको अभिव्यक्ति आफैले हगेको कट्टुको दिसा पनि नगरपालिकाले सफा गरिदेओस् । अर्थात् यथार्थमा जसले त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका छन्, सबैभन्दा पहिले उनीहरुनै स्वास्थ्यका हिसाबले सुरक्षित छैनन्, अनि उपभोक्ताहरुलाई थप असुरक्षित बनाइरहेका छन् ।
अहिले बजारमा रांगोको विगविगि रहेछ । मासु मण्डि भन्दा पुर्वपट्टिको बजार सुकुटि कर्नर थियो । त्यहि दुर्गन्धित सुकुटि प्याक भएर विदेश पनि जान्छ रे, किनकि किन्ने विदेशिलाई त्यो मासुको दुर्गन्ध र क्वालिटिको कुनै प्रमाणपत्र उपलव्ध हुँदैन । सुन्दर नेपालको अर्गानिक सुकुटि । कति ठगिएका छौं हामी उपभोक्ता ? मैले मनमनै सोंचें, त्यो भन्दा बढि त अर्गानिक सुकुटिका नाममा केहि विदेशि पनि ठगिएका होलान् ।
तर मण्डिमै एउटा पसले इमान्दार थिए । साइनबोर्डमै लेखिएको थियो, यहां बाख्रिको मासु पाइन्छ । सांच्चै त्यहाँ कुनै मिसावट छैन, रांगोको मिसाउँदा पनि महंगो पर्छ भने अरु के विकल्प हुन्छ र बाख्रिको मासु बेच्नेलाई । तर उनैबाट किनेको मासु खसीमा मिसाइन्छ रे, नजिकै एक जना बजारकै उपभोक्ताले कानमा सुटुक्क भनेका थिए । स्त्री र पुरुषको मासुमा कम्तिमा दुई सयको फरक छ, एक किलोमै ।
दुर्गन्धको कुरै नगरौं, सायद उपभोक्ता किन्न गए, त्यहाँ एक किलो मासु पनि बिक्ने अवस्था छैन, धन्न उपभोक्ताले त्यहाँबाट किनेका मासुको बारेमा जानकारीनै पाएका छैनन् । होटलमा पाकेको मासुमा त्यो दुर्गन्ध आउँदैन । बेखवर छ स्थानीय तह । सायद उपमहानगरपालिकाका मेयरसापले त्यो अवस्था देखेका छैनन्, उनका सहकर्मिहरुले यथार्थ व्रिफिङ गर्दैनन्, यो विषय अन्योलजस्तै बनेको छ । स्मार्ट सिटिमा मान्छे नै ढल्ने खालको मासु उपभोक्ताहरुलाई ढाकछोप गरी खुवाइन्छ भने यो भन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ । किन सुध्रिंदैन मासुमण्डि । उपभोक्तालाई ताजा मासु खाने बानी परेको छ, फ्रिजमा राखिएको मासु ओसिलो हुन्छ, अनि किलोमै कम चढ्छ भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ ।
काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले यसै समस्यालाई बुझेर तुलसीपुरमा फ्रोजन मिटसपको परीकल्पना गरी व्यवसाय सुरु गरे, तर उपभोक्ताले फ्रिजमा चिसिएको मासुनै किन्दैनन् । उपभोक्ताहरुको यो मुर्खताको सम्बोधन कहिले हुने ?
एकजना चिकित्सकले भने, आनीवानीमा परिवर्तन गर्नै मुश्किल छ । किन सफा हुन सकेन, मासु मण्डी ? बेइमान छन् व्यवसायीहरु । दोष नगरपालिकालाई थोपरीरहेका छन् । नगरपालिकाले उपलव्ध गराएको जग्गामा पनि उनीहरु आफै व्यवस्थित हुने सुन्य प्रयास गरिरहेका
छन् । ‘मासु मण्डी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, थुपारेको फोहर लिन आधा महिना सम्म पनि नगरपालिकाको गाडि आउँदैन।’ त्यसैले काँचो मासु स्वस्थ हुन सकेको छैन । कम्तिमा पनि दश दिन थुपारिएको फोहर सुटुक्क पातु खोलामा फालिदिन्छन् उनीहरुले, तर उनीहरु निस्फिक्रि छन् ।
आफुले नगरपालिकालाई भाडा तिरेको भन्दै सरसफाइको जिम्मा पनि नगरपालिकाले लिनुपर्ने र सटरमा तारजालीको व्यवस्थापन पनि गरीदिनुपर्ने बताउंदै आएका छन्, तर उनीहरु स्वयम् जवाफदेहि भन्दा पनि उपभोक्ताहरुलाई खुलेआम ठगि गर्न अभ्यस्त छन् । बधशालाको त कुरै नगरौं, जहां दह्रो मुटु भएका मान्छे मात्रै एक मिनेट टिक्न सक्छन्, बाँकि उनीहरु बानीपरेकैको राज छ । कुकुरले बाँकि ड्युटि । मानौ बधशालामा भुक्तानी गर्न नपर्ने सुरक्षा चौकिदार ती कुकुरहरु हुन्, जसले मैदान चाटेर सरसफाईको समेत जिम्मा लिएका छन् ।
व्यवस्थापनको जिम्मेवारी १८ का वडाध्यक्षलाई
मासु मण्डी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नम्वर ५ मा छ । तर वडाध्यक्षलाइ सो मण्डी व्यवस्थापनको जिम्मा छैन । वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष माधव वलीलाई त्यसको जिम्मा नगर प्रमुखले दिएका छन्, तर अनुगमनमा नगरपालिकाकै माताहतमा रहेको पशुसेवा कार्यालयले नगरपालिकाका संयोजकलाई नै जानकारी नदिएर अनुगमन गरे । पाँच सय रुपैयाँको भत्तामा हामी कम्तिमा दुईदर्जन सञ्चारकर्मिहरु खेरिएका थियौं त्यहाँ । नगरपालिकाका प्रेस संयोजक मात्रै, काजु शर्मा एकैछिन देखिएका थिए, त्यसपछि गुमनाम….।
वडाध्यक्ष विरेन्द्र शाह भन्छन्, ‘मासु व्यवसायी र नगरपालिका दुवैको कमजोरी देखिएको छ, आत्मसमिक्षा नगरे अवस्था अझै दुर्भाग्यपुर्ण बन्न सक्छ ।’ मासु मण्डिको अनुगमनमा संबन्धित उपमहानगरपालिकाका जिम्मेवार अधिकारीलाइ भने पशु सेवा कार्यालयले जानकारी गराएन । व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका अध्यक्ष माधव वली भन्छन्, ‘सहज व्यवस्थापन र अनुगमनका विषयमा कुनै जानकारी भएन, तैपनि हामीले दिर्घकालिन गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’
मासु ऐन कार्यन्वयन भएन
यसैबीच पशुसेवा कार्यालयका अधिकारीले मासु जाँच ऐन २०५५ कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिले पर्याप्त अधिकार दिएपनि नगरपालिकाले यो विषयमा कार्यविधि बनाएर ऐन कार्यान्वयनको प्रयास नगरेको बताएका छन् ।
‘ऐन कार्यान्वयन गर्न पटक पटक आग्रह गर्यौ, तर अझै कार्यविधि बनेकै छैन’— पशुसेवा कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख सुदाम भट्टले भने । उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयन गरेर मासु जाँच अधिकृत राख्ने अधिकार स्थानीय तहलाइ नै पर्याप्त छ । ऐन कार्यान्वयन नहुँदा जिल्लाका कुनैपनि तहमा स्वस्थ मासु उपलव्ध हुन सकेको छैन । बजारमा बिक्रि गरिने मासुुहरुमा पर्याप्त मात्रामा हानिकारक व्याक्टेरीयाहरु छन्, जुन गर्मिको मौसममा थप सक्रिय हुने प्रवृत्तिका हुन्छन् ।
“निष्पक्षता, पारदर्शिता र गुणस्तरीयतामा सधैँ ध्यान दिनुस्” ...